Panasonic Air Purifier F-PXM55ANS (Gold) ~ ICT.com.mm
HomePanasonic Air Purifier F-PXM55ANS (Gold)
Brand: Panasonic Coverage Area: 41m2 (441ft2) Sensor: Dirt / Odor Allergy UK Seal of Approval, Nanoe Technology, ECONAVI Dimension (HxWxD): 580 x 300 x 205 Weight: 5.8 kg Model Number: F-PXM55A ကျွန်တော်တို့... [Learn more]
Brand: PanasonicSKU: 189266N/ASee more: Cooling & Air Quality, New Arrivals, Panasonic, Products, ShopFilter by: Air Purifiers,
Coverage Area: 41m2 (441ft2)
Sensor: Dirt / Odor
Allergy UK Seal of Approval, Nanoe Technology, ECONAVI
Dimension (HxWxD): 580 x 300 x 205
Model Number: F-PXM55A
ကျွန်တော်တို့ နေစဉ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ လေထုညစ်ညမ်း မှုတွေဟာ အနည်းနဲ့ အများရှိနေကြစမြဲပါ ။ ဖုန်မှုန့် ၊ ဘက်င်္တီရီးယား ၊ မှို ၊ ဗိုင်းရပ် (စ်) များကို သန့်စင်ပြီးအမြဲလန်းဆန်းတဲ့ လေထု ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကို Panasonic Air Purifier F-PXM55ANS မှ အကောင်းဆုံးဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ ။ Super Nanoe G နည်းပညာဖြင့် လေထဲမှာ ရှိတဲ့ 2.5 မိုက်ခရို မီတာ ထက် အလွန်သေးငယ်သော အမှုန်မွှား များကိုပင် ၉၉ % ထိ ချေဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အခန်းအခြေ အနေ လူ လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေများ အလိုက် လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲပြီး အေးမြလတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသော ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ် ပြုလုပ်ပေးပါတယ် ။ ဒါအပြင် စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုကို ၆၀ ရာခိုင်နှု န်းထိ ချွေတာပေးတာမို့ သင်နေထိုင်ရာ ဝန်းကျင်ကို အချိန်ပြည့် သက်သောင့်သက်သာ ရှိစွာနေနိုင်မှာပါ ။ မိသားစု ၊ ချစ်ခင်သူများအတွက် ကျန်မာရေးနှင့် ညီညွတ်သော လေထု ကို ဖန်တီးပြီးလူနေမှုဘဝကို Panasonic Air Purifier ဖြင့် အဆင်မြှင့် တင်လိုက်ပါ ။
Energy Saving, Eco Operation Mode Runs Only When Necessary
Pollution level varies according to your daily activities.You need to change the speed manaually or automatically by sensros in order to clean the polluted enviroment effectively. ECONAVI is an intelligent technology that can monitor your daily activities and memorize the timeline pf the pollution level.It then controls the operation of the product before pollution spreads throughout the house.
Some surveys indicate that the allergy rates are increasing throughout the world that around 30% of people are suffering from different extent of influences in their lives. Panasonic air purifiers has been endorssed by the British Allergy Foundation approving their allergen removal capability that would improve theor quality of life of this groupvof people.
Smart Sensing, HAZE Mode
Fan Speed is adjusted to remove the pollutants efficiently when corresponding particles are detected.
Total price:K616,000 K602,200
This item: Panasonic Air Purifier F-PXM55ANS (Gold) K559,000